Mas'uuliyiinta ayaa ku cagojugleeyay in ay maxkamad la kori doonan "hadii aan la sameyn xisaab hubin sax ah"
NAIROBI, Kenya – Ku dhowaad 72-saacadood kadib markii ay si rasmi ah u soo baxday natiijada tirokoobkii Kenya ee 2019-ka, hogaamiyeyaasha Soomaalida Kenya ayaa diidey maxsuulka kuna baaqay "xisaab hubin sax ah".
Hogaamiyaha Aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo Arbacadii ganafka ku dhuftay ayaa ku eedeeyay Guddiga in ay "midab-baleen natiijadda ayna faquuqeen shacabka degmooyinka Waqoori Bari".
Aadan Barre Ducaale, oo xulafo muhiim u ah madaxweyne Uhuru Kenyatta, ayaa soo jeediyey xisaab uruurin sax ah oo lagu sameeyo natiijadda oo uu sifeeyay "mid aan loo dhameyn".
"Uma maleynaayo in aad karin kartaan lambaradda…hadii aad dooneysaan kalinimo u qaata qolka jiifka ma ahan qolka fadhiga," sidaas waxaa laga soo xigtay Xildhibaankan laga soo doortey Garissa.
Mr Aadan oo sii hadlaya ayaa yiri: "Hadii aad haystaan rag badan yay guursanayaan? Iyaga miyaa is-guursanaya? Waxaan dooneynaa in aan xog-uruurinta oo ceyriin ah oo kala fur-furan".
"Waqooyi Barri [saddex is-maamul goboleed] tirokoobkoodii 2009-kii wuxuu ahaa 2.39 milyan, shaleyna, xogta lasoo saarey waa 2.47 milyan, macnuhu kor u kaca waa 80,000 – gobolka ugu dhalmada badan, sidee isku qabaneysaa?" ayuu is-waydiiyey mudanaha.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, ahaana Xildhibaan laga soo doortey Lagdera, Faarax Macalin, ayaa gaashaanka u daruuray natiijadda oo uu ku sifeeyay "mid aanan si fiican loo maareyn".
Dad uusan magacaabin oo Dowladda Dhexe ee Kenya ka tirsan ayuu ku eedeeyay in ay "maleegeen xaaladan aan habooneyn".
"Tirokoobka dadweynaha Kenya mar walba waxaa loo maareeyaa si qaldan. Hogaamiyeyaasha dhexe ee Kenya haatan waxay u dabaaldegayaan in ay hoos u soo ridaan bulshadda Soomaalida".
Faarax ayuu ku daray: "Tobbankii ugu fiicnaa hogaamiyeyaasha dhexe ee Kenya waxay ahaayeen kuwa hurda, kusoo toosa kuna riyooda dadweynihii hore ee Waqooyi Bari. Xusuusnow meesha loo socdo waa dhulka".
Gudoomiyaha Mandera, ayaa wacad ku maray in ay maxkamad la kori doonan natiijadda. Hogaamiyeyaasha sarre ee dowladda ayuu ku dhaleeceeyay in ay si qaldan u maareeyeen maxsuulka iyaga oo eegaya "been abuur siyaasadeed".
"Ma aqbali karno fikrad ah in hay'ad dowladeed ay ku dhex biirin karto dacaayad siyaasadeed go'aanno muhiim ah oo siyaasadeed oo si xun u saameyn doona jiilalka," ayuu yiri Cali Roobo, isagoo ku goodiyey maxkamad.
Agaasimaha guud ee Guddiga Qaran ee Tirokoobka Kenya, Zachary Mwangi, oo difaacay kooxdiisa, ayaa sheegay in natiijada ay kusoo baxday nidaamka saxda ah, wuxuuna meesha ka saarey "maareyn xumo".
Hogaamiyaha Aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedkiisa erayadaas.
Ducaale oo ka fal-celiyey hadal uu Xildhibaan xarig ku muteystay
Afrika 27.06.2019. 08:10
"Uhuru marka la yimaado miiska wuxuu u talin karaa qowmiyadiisa"
Afrika 01.02.2020. 07:48